Ego Nkwụnye Akaụntụ | FXCC bụ onye so na ICF
Home / Banyere / Ihe kpatara FXCC / Nchekwa ego nke ndị ahịa
FXCC esowo mgbe niile na iwu kachasị elu nke iwu iwu ụwa, ma na-achọ mgbe nile inye udo zuru oke nke ndị ahịa anyị, mgbe ọ bụla ha na-ere ahịa na ebe ọ bụla ha na-adabere. Ya mere, n'ihi na ụwa anyị na-abanye na kọntinent na-abanye, ụlọ ọrụ ahụ achọpụtala na usoro iwu ya kwadoro ihe ndị dị mkpa maka ọ bụghị nanị na Europe, kamakwa maka mba nile.
Ọtụtụ usoro FXCC na-agafe karịa iwu iwu ndị a chọrọ iji rụọ ọrụ na mba dị iche iche. Anyị na-eme nke a iji nye ndị ahịa anyị nkasi obi na obi ike ọ bụla, ka anyị wee nwee mmetụta mgbe nile ka ha na-emeso anyị.
N'iji ụdị ahịa anyị, ihe ịga nke ọma na njikọ nke ndị ahịa anyị nwere njikọ chiri anya, na site na ntụkwasị obi na nghọta, ịbụ ụkpụrụ anyị, anyị na-achọ ka anyị na ndị ahịa anyị nwee mmekọrịta siri ike, na-enwe mmasị zuru oke n'uche ha.
Inye Nchebe bụ Mgbalị anyị
Nchebe na nlekota oru
FXCC na-eme ka nchedo nchekwa na nche nke ndị ahịa anyị na-echekwa akaụntụ. Ọzọkwa, a na-enyocha nlezianya ego nile iji hụ na nchekwa ego na-eme ka usoro nhazi arụ ọrụ.
N'ịbụ onye a na-achịkwa nke ọma na onye nrụpụtara nke ọma ebe ọ bụ na 2010, anyị na-eme ka anyị na-emeso ndị ahịa anyị ihe n'ụzọ dị mma na ilekwasị anya n'inye nchedo ndị ahịa na nchebe ahịa.
Nkwenye na Nghọta
Ihe nkwado na ogologo oge nkwado na-ewulite na ntụkwasị obi. Iji nweta ahịa ndị ahịa na-achọ, iji nweta nkwanye ùgwù na ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị, si otú a hụ na ha nwere mmasị kasị mma, FXCC na-arụ ọrụ na ezigbo nlereanya STP / ECN. Site na ime nke a, anyị na-akwado ikike nghọta na enweghị mmasị.
Nchekwa Data nke Onwe
N'iji usoro nchekwa nchebe netwọk anyị nke Secure Sockets Layer (SSL), ndị ahịa anyị niile 'echekwara ozi nzuzo.
FXCC na-achọpụta mgbe niile, nyocha ma na-achịkwa ụdị ọ bụla metụtara ihe ize ndụ metụtara ya.
Nchịkọta ego nke ndị ahịa
A na-enye ego ndị ahịa niile na ndekọ ahapụrụ iche, kpamkpam iche na akaụntụ FXCC.
Na-eduzi Banyere Mba Nile
Ka anyị raara onwe anyị nye inweta ego nke onye ahịa anyi, ha na-echekwa ha n'ọdụ ụgbọ mmiri na-eduga ná mba.